Holm dia mpikambana ao Volamena Femman 2013 | Holmbygden.se
Holm dia mpikambana ao Volamena Femman 2013
Posted on 24 Janoary, 2013 ny Holmbygden.se
Iza no mahalala Holms SK tsara indrindra?! Challenge Olle Frisk sy ny hafa rehetra HSK mpankafy! Fanohanana fikambanana amin'ny fomba mahafinaritra. Alao ny fahafahana mifaninana sy Bet amin'ny “Guldfemma” Ora A sosona. Best Holm Connoisseurs hahazo ny baolina kitra nankany Angletera, zava-dehibe 4000 Kr!!
HERE dia afaka milalao an-tserasera eo amin'ny dimy Holm MVP! (Manana taratasy mametraka bokikely amin'ny endrika? Ary niaraka tamin'izay dia hamela ny fahadimy an'i voalohany ekipa mpilalao mba hamela azy ireo mba hisoratra anarana na miantso / teny ny maro ny 0730-332944.)
Ao amin'ny tranonkala vaovao be, guldfemman.se/holms-sk ianao dia ho afaka ihany koa ny SOSO-KEVITRA, manaraka ny mpilalao, manao. Tactical substitutions M. M sy manaraka ny fidirana ho Fives volamena ary jereo KOA IANAO.
vanim-potoana 2013 isika, dia ho amin'ny zava antsoina hoe “Gold Femman - Ny Dream Team eto an-toerana“. Izany no foto-kevitra mitovy amin'ny Aftonbladet Dream Elvan, fa toetra eo an-toerana. Raha tokony ho “mividy” 11 mpilalao avy any Allsvenskan, mpanjifa mifidy 5 Player avy amin'ny A-Team. Tsy misy nofy iraika ambin'ny folo teny, utan iray guldfemma.
Ny mpilalao ao amin'ny ekipa voalohany dia hahazo isa noho ny zava-bitany eo amin'ny ligy. En manampy ger t.ex. dia manondro karatra mena raha manome deductions. Izany indray kosa manondro ny mpankafy volamena fives izay any amin'ny hazakazaka. Ny toerana amin'izao fotoana izao dia foana ho araha-maso ao amin'ny tranonkala iray manokana fa Holm SK Gold Femman (voatokana). Holm ny tsara indrindra tipster izay fahadimy hevitra indrindra rehefa ny andian-dahatsoratra dia ny handresy ny baolina kitra nankany Angletera, zava-dehibe 4 000 Kr. Na dia tsy misy olona “gamblare” isan'andro, dia fomba mahafinaritra an-tsitrapo mba hanohanana ny sehatry in Holm. Azonao atao ihany koa afaka mitambatra amin'ny resultattjänst malalaka SMS, mba mahazo vokatra mitohy sy mifanaraka Info.
Tamin'ny Martsa / Aprily, dia handeha hividy ny volamena dimy ary avy eo isika ao amin'ny fikambanana ihany koa ny fampiroboroboana izany amin'ny alalan'ny taratasy fivarotana pirinty. Interest Sign up ambony, mba hahazoana fanazavana fanampiny, rehefa tonga ny fotoana. Tsy manan-kery amin'ny fomba rehetra. Isika dia manana rohy mankany amin'i ny toerana ao amin'ny kilasy fahadimy Volamena eto rehefa vonona ny zava-drehetra. Ny volamena fahadimy vola lany eo 50 € sy 250 SEK arakaraka izay mpilalao hividy.
Gold Femman dia mamorona fidiram-bola vaovao ho Holm Sportklubb, Fa ambonin'ny zavatra rehetra, ny fanantenana dia hoe afaka mampitombo ny fahalianana sy ny fandraisana anjara manodidina ny fikambanana. Ampio izahay mba hilaza izany. ampiasao azafady “Like” ary “Share”-rohy ary hanampy antsika hampiely ny teny ny namanao eto amin'ny Facebook.
Read more about Gold Femman, scoring rafitra, vidin'ny, M.W.. amin'ny guldfemman.se/info.
Read more about Holms SK.